Axad, 2nd December 2018 (Mogadishu) AminaWehelie- Ka dib markii uu xirnaa muddo13 maalmood ah, wax dambi ah na aan lagu soo oogin, maxkamada shari ahna la horgeyn, ayaa maanta laga sii daayey xabsiga, Wariye Nuur Ismaaciil Sheekh oo ahaa maamulaha website ka Shaaciye, kana mid ahaa wariyayasha caanka ah ee Soomaaliyeed oo ka howgala Muqdisho.
Wariye Nuur ISmaaciil Sheekh
Nuur Ismaaciil Sheekh oo aan goor dhoweyn teleefoonka kula hadlay isagoo jooga Muqdisho, ayaa ii sheegay in uu nabad qabo, wax kasta oo soo marayna uu ku faraxsan yahay in uu xorriyadiisa dib u hanto.
Xildhibaan Saadaq Cabdikariim
Dadaalka lagu sii daayey wariye Nuur Ismaaciil ayaa waxaa ka qeyb qaatay xildhibaano, wariyayaal iyo dad bulshada u ololeeya waxaase ugu dambeyntii ku guuleystay sii deyntiisa, Xildhibaan Saadaq Cabdikariim oo ah xildhibaan baarlamaanka fedraalka ah ka tirsan kuna matala wariyaha oo maanta damiin ku soo daayey.
Waxaan iyadana meesha ka maqneyn oo xusid mudan, juhdiga ay geliyiin xildhibaanno uu ka mid yahay Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo gacan weyn ka geystay cadaadiska iyo ka miro-dhalinta lagu sii daayey Wariye Nuur Ismaaciil.
Dhanka kale mar aan teleefoonka kula hadlay goor dhoweyd xildhibaan Saadaq Cabdikariim wuxuu ii sheegay in uu gutay waajib ka saarnaa dadka uu baarlamaanka ku matalo, uuna ka mid yahay Wariye Nuur.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaannada ugu firfircoon baarmaanka federaalka ah ayaa isagana ii sheegay in ay ilaah uga mahad yahaan in uu wariye Nuur xoriyadiisii helo.
Wariye Nuur Ismaaciil ayaa la iska xiray ka dib markii eedeyn aan raad lahayn iyo awood sheegasho aan sharci ku dhisneyn lagu maquuniyey, waxaana xiray guddoomiyana gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ka duulaaya dacwad aan raad ku dhisneyn oo ay u gudbubsadeen, dad uu ka heybeysanayo oo wariyaha si u dhibsaday.
Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka mid ah saraakiisha sare ee ururka suxufiyiinta ee NUSOJ ayaa todobaadkii hore si cad uga hadlay xaqdaradda, cagajugleynta iyo baqdin gelinta ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kula kacdo Suxufiyiinta ka howgala magaalada Muqdisho, wuxuuna ku tilmaamay nidaamka ah CABSI-GELI AMA IIBSO oo dolwadu ku dhaqanto in eey gef iyo gaboodfalba ku tahay qorriyada saxaafadda.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii ay hanaanka dalka la wareegtayba la soo baxday nidaam aaneey hore ugu dhaqmin dowladihii ka horeeyey, kaas oo ah in ey furtay xafiis hoos tagay Raiisulwasaaraha dalka, oo looga hanjabo, laguna aflagaadeeyo muraacadka iyada ka soo horjeeda iyo cid kasta oo suxufi , siyaasi, ama xiddig ka ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, dhanka kalena laga shaqaaleysiiyo dhalinyaro iyo dad waaweynba oo u xilanaya wax yar ii sandareerto ah oo afiisku siiyo, kuna badashaan aflagaadeynta dadkabulshada ka dhex muuqda cideey doonaan ha ahaadeenee, iyagoo u sii marinaya baraha bulshada oo ah isha kali ah oo dowladdu dalka ka maamusho.
Previous FIRST VOTE ON YEMEN WAR:
Next Banaanbaxyo looga soo horjeedo qalaalasaha dowladda Soomaaliya ka wado KGS oo ka dhacay Afgooye
2 thoughts on “Wariye Nuur Ismaaciil Sheekh oo xabsigii gardarro laga sii daayey”
Halima dirie says:
Asc waxaan Mahad oo dhan iska leh Alle subxaana watacaalaah waxaan Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo daynta walaalkeen wariyahaan nuur . markii horena aan wax danbi ah lagu jirin ee xarigiisu uu ahaa kaa xoogbadni maantay bari yeelkeede waxaan koo Mahad u celinaah inti ka qayb qaaday soo dayntiisa waxaan kaloo Mahad u celinaah walaashay Amina musse waheliye iyo website keeda guilaysto aamina
SaaS waaye runta ka dhawaaji kkkkkkkkk
Waa ka helay markaa tiraah
An waa Hadlaa